India Vashanyi: Vienna Tourism Inokumirira Iwe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » India Vashanyi: Vienna Tourism Inokumirira Iwe
Austria Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • India Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ositiriya, iyo nyika inoyevedza iri pakati peEurope iyo iri pamusoro peiyo index yekugara, yagara ichikwezva vashanyi vanobva kuIndia. Zvikonzero zvacho? Runako rwayo rwepanyama, nhoroondo yemimhanzi, uye tsika, kutumidza mamwe, kuita zvinhu zvekuita muVienna zvinonakidza.
2020 igore rezvirangaridzo zvemazita makuru munyika yemimhanzi, kubva kuBeethoven kusvika kuMozart, iri chokwadi chekukurudzira vashanyi vazhinji vehunyanzvi netsika mhando kuti vatungamire Vienna, guta guru reAustria. Iri guta rinozivikanwa nekuwanikwa kwaro kwemvura kunobva kuzvitubu zvepanyama, uye munyika yanhasi, guta rinogadzira zviuru zvemisangano gore rega.
Nyika yeAustria ine musha wemapaki eokuvaraidza, nzvimbo dzinochengeterwa mhuka, uye mamiziyamu, chokwadi kukoka vanopinda kubva kune vadiki nevechidiki pamoyo.
Chikwata chevakuru vevashandi vekushanya kubva kuVienna, Tirol, uye Swarovski chaive kuIndia nguva pfupi yadarika, ichiudza vezvokutengeserana uye vezvenhau kuti kunyangwe seAustria yatove nemukurumbira, nzvimbo zhinji nezvinokwezva zviri kuramba zvichiwedzera zvivakwa ingave nzvimbo dzekuratidzira kana nzvimbo dzemusangano. Kuwedzeredza uku kwazvino kutora kwekushanya, nyika inozivikanwa neayo madiki emhuri-anomhanya mahotera uye nzvimbo dzinofamba-dzakanaka.
Chikafu chemiriwo hachisi nyaya pano, uye kufamba kwechitima kuri kukurudzirwa nenzira hombe. Kubatana neVienna kwakasimbiswa neAir Arabia zvichigonesa vashanyi kubva kuIndia kubhururuka kubva kumaguta gumi nematanhatu muIndia kuenda kuVienna kuburikidza neSharjah.
Idzi inhau dzakanaka dzevashanyi vanobva kuIndia uye inongomisikidza kuedza kwekushanya kweAustria, yanga ichishanda muIndia kwenguva yakareba. Kushanya kweAustria kwakashanda pakuita kuti nyika yayo izivikanwe nevafambi nekuziva kusingagumi uye kuburikidza nekuedza kweruzivo kumatunhu ese enyika.
Kupfura kwemafirimu kwakabatawo chakakosha chikamu mukuwedzera kwekushanya kweAustria sezvange kuri kubatanidzwa kwevanyori veIndia mukugadzira zvinokwezva zvinozivikanwa munyika.